Hiran State - News: HS:- Qoysaska degan xarumaha dowlada oo sheegay in laga gireeyey.
HS:- Qoysaska degan xarumaha dowlada oo sheegay in laga gireeyey.
HS:-Dalka Soomaaliya mudadii ay socdeen dagaalada sokeeye waxyaabo badan ayaa ka dhacay sida dil, dhac , kufsi iyo hantida shacabka iyo mida guud oo la xalaaleysto.
Hadaba tan iyo markii ay dowlada iclaamisay in laga baxo xarumaha dowlada waxaa soo baxay in qoysas badan oo degan xarumahaasi qaarkood laga qaadi jiray Ijaar qaarne ay xoog ku deganaayeen mudo fog.
Qoysaska qaarkood ayaa sheegay in ay shaqsiyaad dibadaha ku nool ka qaadan jireen ijaar uguna shegeeyeen in ay iyagu leeyahiin dhismayaasha oo ay horey uga qaatatay dowladii kacaanka markii ay meesha ka baxdayna ay iyagu qabsadeen.
Mid ka mid ah idaacadaha ka howl gala Mogdisho ayaa hada qorsheyneysa iney qabato barnaamij dadka xarumaha dowlada iyo mida shacabka degan lagu dhiiragelinayo iney sii deganaadaan goobahooda. mid ka mid ah waxgaradka magaalada Mogdisho oo naga codsaday in aanu magaciisa xusno ayaa inoo xaqiijiyey in rag iskugu jiro ganacsato, siyasiyiin iyo waliba qaar ka mid ah masuuliyiinta iska leh idaacadaha Mogdisho ay qoysaska oo doonayey iney guuraan maalmahii la soo dhaafay ku dhiirageliyey iney deganaadaan halkaasi iyagoo been u sheegaya oo leh markey dowlada idiin timaado waxaad dhahdaan waa naga diyaar in aanu goobtaan baneyno laakisne aysan ficil ahaan ka bixi doonin.
Waxaa kale oo xaalada sii murjiyey kadib markii qoysaaska qaarkood loogu sheegeeyey ineysan xarunaha dowlada ka bixin ilaa qoys kasta laga siiyo dhaqaalo ay ku dhisan karaan guriyo iyo lacag ay ku bilaabaan ganacsi iyo wax la mid ah.
Sikastaba wxaan shaki ku jirin in dhibaato weyn laga mari doono sidii dadkaasi looga saari lahaa xarumaha dowlada maadama ay hantida qaranka iyo dhismayaasha danta guud ay iska dhaadhiciyeen iney iyagu dhaxal u yeesheen. inkasta oo aanu dooneyn in aanu ka hor dhacdo mid ka mid ah idaacadaha ugu afka dheer kuwa ka howl gala Mogdisho oo isku diyaarineysa iney codad ka qabato qoysas fara ku tiris ah oo ka soo jeeda beelaha aan hubeysneyn oo qaarkood gaaray magalada Mogdisho xiliyadii ay deganadooda ku dhufteen abaaraha ay barnaamij ka diyaarin doonaan maalmaha inagu soo aadan iyagoo hal ku dhigoodu yahay qoysaska dan yarta ah ee degan xarumaha dowlada oo laga saarayo iyagoon heysan meel ay degaan iyo wax la mid ah.
Sidoo kale qof haween ah oo iyadu ku leh guri u dhaw mid ka mid ah xarumaha dowlada oo ay qoysaskaan qaarkood degan yahiin ayaa tiri maalmahii ina dhaaftay waxaa qoysaskaan la shirayey shaqsiyaad siweyn looga garanayo Mogdisho iyagoona qoysaska u sheegayey in ay halkooda sii deganaadaan ayna iyagu difaaci doonaan hadii lagu soo xad gudbo,waxeyna tiri dadkani badankooda waxey ka soo jeedaan gobolada Galgaduud iyo Mudug waxaana iney xarumahan sii deganaadaan ku dhiiragalinaya shaqsiyaad siweyn looga yaqaano Mogdisho iyo Soomaaliya oo dhan ayeyna hadalkeeda ku soo qatintay.
Ugu danbeyn hada waxaa la marayaa in xarumaha dowlada laga saaro qoysaska degan, laakisne waxey su,aal weyn ka taagan tahay sida shacab ay dad gaancsato, siyasiyiin, qaar ka mid ah mediyaha Mogdisho ka helaya dhiiragelin uga baxayaan xarumaha dowlada? wali waxaa la marayaa xarumaha dowlada guryahii dadka caadigaa laga heystay waa dhiman yahiin oo waliba qaarkood lagu dhex dilay dadkii lahaa kadibna la degay.
Dagaalo iyo colaad ayaan hor boodayaa mudo 21 sano ah maantana xarumahii dowlada ka bax waxey ka mid tahy siyaasad xumida iyo bur burka laga dhaxlay qaar ka mid ah beelahii hor boodayey ururkii magaca qurxanaa laakinse dalka iyo dadka Soomaliyeed bur burka iyo fowdada u horseeday ee USC.
Muuqaalka sawirka aad aragtaan waa xmid ka mid ah rumaha dowlada ee sida weyn loo degan yahay qoysas badana laga kireeyey ayna adkaan doonto sidii ay qoysaska degan uga bixi lahaayeen goobtaas oo shaqsiyaadka xooga ku heysta ay dibada ku nool yahiin kirada ay xaruntaas ka qaataane loogu diro wadamada ay kunool yahiin sida warar sugan lagu helayo.
Dhawaan waxaanu sugeynaa gudiyada howshaan loo xilsaaray oo leh mudadii ayaa loo kordhiyey qoysaska heysta xarumaha dowlada oo iyagii la kala dalaalayo marka la eego qaabka ay hada Mogdisho wax uga socdaan iyo diyaar garowga ay qoysaska qaarkood ku jiraan.
· admin on February 01 2012 12:11:35 · 0 Comments · 1718 Reads ·
14,569,758 unique visits